State of the Union Season 2: Zavatra tokony ho fantatrao! - Fialam-Boly
State of the Union Season 2: Zavatra tokony ho fantatrao!
Rehefa niara-niasa i Stephen Frears (Quiz) sy Nick Hornby (Brooklyn) mba hiara-hiasa ao amin'ny State of the Union an'ny SundanceTV, fampirantiana bitika mahafinaritra momba ny fanambadiana, dia efa ho telo taona lasa izay no nahalalan'izao tontolo izao izany.
Tao anatin’ny fizarana folo naharitra 10 minitra, dia nanadihady tsy an-kijanona ny fanambadian’ny mpivady vao Louise (Rosamund Pike) sy Tom (Chris O’Dowd) tany Londres izy ireo. Ny ampahany tamin'izy ireo dia nampiseho ny mpivady nialoha ny lalao tamin'ny toe-po isan-karazany talohan'ny fotoam-pitsaboan'ny mpivady isan-kerinandro, na dia nisaraka ara-jeografika aza izy ireo noho ny antony samihafa.
Ny iray amin'ireo zava-bita sarotra indrindra teo amin'ny fiainana, ny fanambadiana salama, dia voaporofo fa fanazaran-tena manaitra sy mahatsikaiky amin'ny fanadihadihana ny kibon'ny iray amin'ireo hetsika tady mahasarika indrindra eo amin'ny fiainana: fanambadiana.
Niverina tamin'ny vanim-potoana faharoa i Frears sy Hornby (izay nivoaka voalohany tamin'ny andron'ny mpifankatia, tsy latsaka) miaraka amin'ny mpivady vaovao, Amerikana Scott sy Ellen, ho mpilalao fototra (Brendan Gleeson sy Patricia Clarkson).
Efa nivady nandritra ny 30 taona izy ireo ary niara-nitaiza fianakaviana, saingy noho izy ireo poakaty ankehitriny, dia niharatsy ny tsy fitovizan'izy ireo noho ny fahavononan'i Scott sy ny fanirian'i Ellen handray anjara amin'ny hetsika farany tsy misy fetra.
Tsy mionona amin'ny fitsaharana amin'ny famoronan-dry zareo, i Frears sy Hornby dia nitazona ny halavan'ny fizarana ary nanitatra ny fetran'ny fitantarana tamin'ny alàlan'ny tsy famadihana ny toerana ho any amin'ny fivarotana kafe Gen-Z—ilay antsoina hoe Mouthfeel Cafe—fa amin'ny alàlan'ny famelana azy ihany koa. Fifandraisana eo amin'ireo mpilalao mpanohana, anisan'izany ny tompon'ny kafe, Jay (Esco Jouléy), naman'i Ellen, ary ireo mpitsabo ny mpivady.
Ity fanehoan-kevitra ivelany ity dia miteraka resadresaka eo amin'ny mpivady mandritra ny fizarana folo amin'ny andiany, izay mirakitra lohahevitra toy ny fampiasana mpisolo anarana mifoha amin'ny vokatry ny tsy fivadihan'i Scott 20 taona lasa izay.
Izy io dia mpandresy amin'ny maha-foto-kevitra azy, ary miantehitra amim-pahendrena amin'ny tanjaky ny mpilalao azy mba hanintonana ny fahalianantsika sy hamela azy hanambara akaiky ireo sombintsombiny miharihary sy tapaka eo amin'ny mpivady. Ny vazivazy mampihomehy teo amin'i Pike sy O'Dowd dia nahatonga anao hamaka azy ireo na dia teo aza ny lesoka sy ny fahadisoany, ary tena marina izany tamin'ny raharaha Pike.
Miaraka amin'i Gleeson sy Clarkson, mpivady efa tonga amin'ny vokatra efa voafaritra mialoha izy ireo. Taorian'ny taona maro nahasorena ny tombontsoan'i Scott sy ny toe-tsain'ny tsy fahita firy, dia tonga amin'ny fotoana rava i Ellen, ary liana kokoa amin'ny fikatsahana fiainana ara-panahy amin'ny maha Quaker vao haingana sy mpikatroka ara-tsosialy izy fa tsy ny manambady olona tsy liana amin'ny ho avy. mihazona.
Na dia efa voalahatra kokoa hatrany am-piandohana aza ny fiafaran'ny fanambadiana, dia manana feo hafa tanteraka ny feon'ilay fampisehoana. Somary manafintohina izany. Na izany aza, arahabaina an'i Hornby sy Frears noho ny fanehoana faniriana mazava hanala ny fiheverana mialoha amin'ny fanarahana ny lalana mitovitovy.
Ny fisondrotry ny mpilalao ho an'ny vanim-potoana 2 dia manao sorona ny fifandraisana akaiky amin'ny vanim-potoana 1, izay tombony lehibe ho an'ny endrika sy ny fanandramana fitantarana, saingy mahafinaritra ny tsy mahafantatra hoe avy aiza ny fifandirana na ny fifandirana amin'ity indray mitoraka ity satria tsy azo vinavinaina izany.
Ny hany zavatra nanalavitra ny sainay tamin’ny resadresaka, toe-po ary fitandremana nataon’i Louise sy Tom dia ny filalaovana izay nitranga teo ivelan’ny toeram-ponenan’izy ireo. Scott sy Ellen kosa dia manana kodiaran-telo amin'ny endriky ny Jay, mpandinika tsy mimari-droa lasa namana izay mihantsy azy ireo hihoatra ny fiheverany sy ny fitongilanana momba ny firaisana ara-nofo sy ny fanehoana ny tena ankehitriny.
Minitra maro amin'ny fizarana isan-karazany no natokana ho an'ireo telo mifanerasera fa tsy ny mpivady fotsiny, ka tsy afaka miaina ny toe-javatra misy ny fitiavana. Ary ireo fanitsiana endrika ireo dia manome ny fifanakalozan-dresaka ho toy ny hoe fantatr'ilay mpilalao fa voafetra ihany ny fotoana ahafahany mamoaka izay rehetra ilainy holazaina.
Na dia eo aza ireo fahasahiranana ireo, dia mahaliana ihany koa ny mahita an'i Gleeson sy Clarkson manome ity fanambadiana rava ity miaraka amin'ny fahatsapana tantara, fahasosorana ary ny hakantony mandritra ny fitsidihan'izy ireo, izay hita fa mampalahelo sy tena misy.
Clarkson, indrindra indrindra, dia tena manam-paharetana sy feno alahelo amin'ny maha-vehivavy tonga amin'ny hevitra hisaraka amin'ny maha-olombelona amin'ny mpiara-belona aminy mba ho tonga ilay vehivavy fantany fa ilainy ankehitriny mba handrosoana.
Very Soul Aside – Ny Fantatsika Hatreto
Vanim-potoana faha-2 amin'ny Peacemaker: Ny antsipiriany tokony ho fantatrao izao!
Lords of the Fallen 2 – Mety ho lasa malaza kokoa noho ny fanahy maizina!
Tsy azonao atao ny tsy ho variana rehefa sambany eo amin'ny fiainany izy no sambany handray fanapahan-kevitra feno fitiavan-tena, saika mihodinkodina eo amin'ny hodiny rehefa manaiky ny safidiny. Ary avy eo, etsy ankilany, misy ny fandresena mangina amin'ny fijerena ny gazety an-gazety Scott mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa ary amin'ny farany dia mandresy lahatra azy ho marin-toetra aminy sy ny tenany voalohany amin'ny fifandraisan'izy ireo.
Soa ihany fa i Scott tsy sarotiny sy mahasosotra matetika an'i Gleeson no tsy tena mpanohitra ny sarimihetsika. Ho fanampin'ny maha-toetra matanjaka azy noho ny tsy fahatokisana azy sy ny fahafantarany ny fomba nitondrany azy ho amin'izao fotoana izao, dia lehilahy nahazo tombony tamin'ny haitraitra am-polony taona maro koa izy ary tsy nohanin'i Ellen.
Rehefa vita ny vanim-potoanan'ny fahasahiranan'ny olombelona saro-pady sy ny fiaiken-keloka cathartic, ny State of the Union dia manohy mijery ny psikolojian'ny fanambadiana. Ny zava-misy momba ny toeran'i Scott sy Ellen dia mety tsy misy ifandraisany amin'ny fiainan'ny mpijery manokana, saingy be dia be ny fihetseham-po eo amin'izy roa izay azo ifandraisana sy miredareda vokatry ny sarin'i Gleeson sy Clarkson momba ireo olona roa ireo.
Na dia amin’ny fisehoan-javatra fohy toy izany aza, dia hisy teny be dia be holazaina sy fotoana ambara izay ho tadidy ela be aorian’ny fiafaran’izy ireo.
Sandwalkers - Izay rehetra fantatsika hatreto
LOVE ISLAND USA SEASON 3 – NY MPIANATRA, NY TETIKA ARY NY REHETRA TOKONY HO FANTATRAO
tv sy sarimihetsika maimaim-poana amin'ny streaming an-tserasera
ny fomba ahazoana cola hala
mora hanova youtube ho mp3
sarimihetsika an-tserasera sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana
kilalao azo sintomina tsy voasakana ao am-pianarana
mandra-pahoviana no tsy maintsy hamerenanao ny lalao etona